Heshiis laga gaaray colaadda Soomaalida iyo Canfarta | KEYDMEDIA ONLINE
Heshiis laga gaaray colaadda Soomaalida iyo Canfarta
Kadib dagaallo sababay qasaaro xooggan oo maalmahaan ka socday xuduudda u dhaxeysa Dowlad degaanka Soomaalida iyo Canfarta ayaa laga gaaray heshiis lagu joojinayo dagaalka.
ADIS-ABABA, Itoobiya - Madaxweynayaasha Dowlad degaanada Soomaalida iyo Canfarta ayaa kala saxiixday heshiis lagu joojinayo dagaallo qaraar oo dhawanahaan ka socday Gobolka Sitti oo ay wada degaan labada maamul.
Dadaallo ay hor boodeyso Wasiiradda nabadda ee dalka Itoobiya Mufariyaat Kaamil, ayaa la isku hor fariisiyay Madaxweynaha Dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo Madaxweynaha Dowlad degaanka Canfarta Awal Arba, si ay qalinka ugu duugaan heshiis lagu joojinayo xabadda.
Wadahadallan oo ka dhacay Caasimadda Itoobiya ee Adis-ababa, oo sidoo kale ku lug lahaa Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, ayaa labada dhinac lagu cadaadiyay in ay kala saxiixdaan qodobbo kama danbeys ah, si loo helo nabad kuwada noolaashiyo degaanka.
Waxaa lagu heshiiyay in la joojiyo xabadda, lana kala qaado ciidamada, la sameeyo ku dhawaad tobon KM oo ka caaggan hubka xudduudka ay wadaagaan labada maamul, in baaritaan lagu sameeyo dhibka dhacay, in goobaha dagaalladu ka dhaceen amnigooda lagu wareejiyo ciidamada Fadaraalka iyo qodobo kale.
Colaadda ka jirta xuduudda Canfarta iyo Soomaalida ayaa salka ku heysa murka dhulka, waxaana maamulki TPLF uu si qasab ah Gobolka Sitti oo Soomaalidu leedahay ugu daray maamulka Canfarta.
Sidoo kale waxaa arrinkaan gadaal ka riixaya damaca qowmiyadaha aaminsan in ay iyagu yihiin Itoobiyaanka rasmiga ah, waxayna u soo xamaaranayaan helidda meel ay ka arki karaan biyaha Soomaaliya iyo Jabuuti.